सुनको भाउले बनायो फेरि नयाँ कीर्तिमान, इतिहाँस पहिलोपटक यति महँगो ! – " सुलभ खबर "
सुनको भाउले बनायो फेरि नयाँ कीर्तिमान, इतिहाँस पहिलोपटक यति महँगो !
काठमाडौं सुनको भाउ नेपाली बजारमा इतिहासकै उच्च भएको छ । बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्यमा बिहीबार पनि तोलाको २०० रूपैयाँ बढेको हो ।नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ८० हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन प्रतितोला ८० हजरा ४ सय र चाँदी प्रति तोला ८ सय ८० मा कारोबार भइरहेको छ ।
मंगलबारको तुलनामा बुधबार प्रतितोला २२ सय रुपैँयाले बढेर सुनको मूल्य ८० हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । आज सोही मूल्यमा २०० अझै बढेको हो ।यसअघि मंगलबार बजारमा सुन तोलाको ७८ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य बढे पनि चाँदीमा भने मूल्य वृद्धि भएको छैन ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुमा सुन राखेर नागरिकले अब ब्याज पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै निक्षेपका रुपमा सुन संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। अब वाणिज्य बैंकहरुले कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि निक्षेपका रुपमा सुन संकलन गर्न पाउने छन्।सुन निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरुलाई नै विस्तृत कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
यसरी सुन निक्षेपका रुपमा संकलन गरेपछि ग्राहकलाई त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी हुनेछ। सुन जम्मा गर्दा नै सो बराबरको साँवा तथा व्याज एकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सुन निक्षेप संकलन गर्ने ग्राहकको केवाइसी विवरण बैंकले राख्नुपर्नेछ। यद्यपी यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बैकर बताउँछन्।